नुवाकोटमा ५० हल गोरुको घम्साघम्सी | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
नुवाकोटमा ५० हल गोरुको घम्साघम्सी
माघ १, २०७६ बुधबार १०:४५:२७ | नवदीप अजनबी
नुवाकोट – नुवाकोटमा माघे सङ्क्रान्तिका अवसरमा गोरु जुधाइने क्षेत्र फैलँदै गएको छ । यो वर्ष नुवाकाेटका विभिन्न ६ ठाउँमा गरी ५० हल गोरु जुधाइने तयारी भएको छ ।
नेपालको राजनीतक खेल, दाउपेज र तिकडमलाई कतिपयले नुवाकोटको गोरु जुधाइसँग तुलना गर्ने गर्दछन् । नेताहरुलाई व्यङ्ग्य गरिने यहाँको गोरु जुधाइमा सधैँजसाे प्रमुख राजनीतिक हस्तीहरु नै प्रमुख अतिथि बनेर आउने गरेका छन् । यो वर्षको गोरु जुधाइमा पनि दुई राजनीतिक हस्ती नुवाकोट आउने भएका छन्–प्रमुख अतिथिको रुपमा ।
तारुकाकाे गोरु जुधाइको प्रमुख अतिथि बन्न नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री सशाङ्क कोइराला आउने हुनु भएको छ भने बेत्रावतीको गोरु जुधाइको प्रमुख अतिथिमा उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फे आउनु हुनु भएको छ ।
यस्तै, घले भञ्ज्याङको गोरु जुधाइमा डा. रामशरण महत प्रमुख अतिथि रहनु हुने भएको छ ।